The Book of the Sea, rakanyorwa naMorten A. Strøksnes. Shark yezhizha. | Zvazvino Zvinyorwa
The Book of the Sea, rakanyorwa naMorten A. Strøksnes. Shark yezhizha.
Mufananidzo naMorten Strøksnes: (c) Bjørn Ivar Voll.
Kubva panguva kusvika pachikamu ichi vanouya kwatiri kubva ku North edhisheni novelties ayo anova anotengesa-zvakanyanya zviitiko kana kubudirira kusingatarisirwe pakati peveruzhinji. Zvakaitika gore rapfuura ne Bhuku rehuni, nemunyori weNorway Lars Kubata. Zvino ndezve Bhuku regungwa, nemumwe mukwikwidzi, Morten Strøksnes. Uye chii chirimo chirimo pasina gungwa kana hombe shaki, ingangoita ngano chisikwa, iri kufamba mumvura dzayo?
Yakabudiswa mwedzi wapfuura we june, yakafananidzwa neyekare senge Melville o Hemingway, kuchinjana machena machena machena kune anotyisa shark, asi zvichimutsa kurwa kwakafanana neiko kwe Chembere negungwa. Ngatitarisei tione kuti uyu musanganiswa wei novel, rondedzero uye kuratidzira nezvekunakidzwa, kuvhima uye hukama hwevanhu nezvakasikwa
2 Bhuku regungwa
2.1 Sekuda kuziva
2.3 Zvakataurwa nevatsoropodzi
Akazvarwa muna 1965, Morten Andreas Strøksnes munyori wenhoroondo weNorway, munyori uye mutori wemifananidzo. Mushure mekudzidza kwake mu Oslo neCambridge, yakatanga yakafara basa rezvenhau iyo inosanganisira zvinyorwa, zvinyorwa, zvinyorwa, makoramu uye kuongororwa kwemapepanhau makuru eNorway nemagazini senge Morgenbladet. Anobatanidzwawo mumakakatanwa eruzhinji. Iye ndiye munyori we mabhuku masere, pamwe chete zvinyorwa zvekunyora nekugamuchira kukuru uye kurumbidza kubva kuvatsoropodzi. Anozviona semunyori wekufamba.
Musoro wekutanga muNorway, Havboka, Izvo zvakafanana neSpanish, asi muChirungu zvakashandurwa se Shark akadhakwa, (akadhakwa shark), ine zvinoreva zvakapetwa. Kune rimwe divi, iyo inobvumira iyo pfungwa ye kudhakwa pamberi pezviitiko zvemunyori uye shamwari yekutora protagonist shark. Kune rimwe divi, zvakanyatsojeka kutaura kuti inoreva mhando yemhuka, a boreal kana Greenland shark. Hukuru hwechena, inogona kurarama kwemakore mazana mashanu - ndiyo imwe yemhando dzakareba kwazvo pasi rose - uye nyama yayo ine chepfu inoburitsa mhedzisiro yakafanana neiya yekudhakwa kukuru.
Munyori Morten Strøksnes neshamwari yake Hugo Aasjord, muimbi uye mutyairi, vachishushikana nekubata boreal shark, ivo vanofunga kupedza gore rehupenyu hwavo vachiyedza. Dambudziko nderekuti zvishandiso zvavo zvinoita sezvisina kukwana. Ivo vanoenda mukati motorized inflatable chikepeVanotakura tsvimbo dzekuredza uye, sechireso, nyama yakaora yemombe.
Iri panguva yekumirira kuti shark ioneke kana Strøksnes fungisisa nezvekunaka kwenzvimbo yavari, iyo Lofoten Islands. Zvakare nezvegungwa zvizere uye zvarinogona kumutsa. Kuti uite izvi, kunze kwekuratidza ruzivo rukuru pamusoro penyaya, haakanganwi kuisa kubata kwekuseka. Iyo yekushanya inoita kunge surreal, asi Strøksnes inoita kuti tigovane mashoma kufungisisa izvo isu tese takave nazvo nguva dzose pakukura kwegungwa nevagari varo.
Anovawedzerawo nekutamba patsika dzevabati vehove, sainzi yesainzi, hunyanzvi, ngano, zvikara zvegungwa, ngarava kana kuongorora. Uye zvirokwazvo anotaurawo nezve ake manzwiro uye manzwiropamwe chete neushamwari.
Vatsoropodzi vakazvitsanangura seimwe rondedzero, musanganiswa pakati pekufungidzira uye nhoroondo yekufamba, ngano dzeNorse, kutsvagurudza uye kurara. Nezviyeuchidzo zvakajeka, pamusoro pezvose, kumabasa aHerman Melville neake Moby Dick uye Hemingway uye Chembere negungwa. Asi zvakare Jules Verne's.
Ivo zvakare vanotaura kuti, zvakadzika pasi, Hakusi kubatwa kwe shark kwakamira kunze, asi rwendo rwuri pakati pe spooky asi chairo uye rwakajeka, yenguva yakapfuura yeiyi chaiyo yakasarudzika dunhu reNorway uye nhoroondo yayo yepanyama, makungwa ayo asina kudzikama achifashukira nezvisikwa zvakasiyana siyana nevanhu vayo.
Uye zvinofanirwa kutaurwa kuti nhoroondo yatotora moyo zviuru zvevaverengi, pakati pavo, semuenzaniso, ndeyechokwadi Jo Nesbø.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » The Book of the Sea, rakanyorwa naMorten A. Strøksnes. Shark yezhizha.